သားသမီးရတနာမရိွေသးခ်ိန္မွာ ခ်စ္ဇနီးကိုပဲ ကေလးေလးလိုျမင္ျပီးခ်စ္ရွာတဲ့ ဒါရိုက္တာဏၾကီးအေၾကာင္းေျပာျပလာတဲ့ ပိုင္ျဖိဳးသု - Cele Connections
ဒါရိုက္တာ ဏၾကီးနဲ့ သရုပ္ေဆာင္ ပိုင္ျဖိဳးသုတုိ့ကေတာ့ အနုပညာရွင္ေတြပီပီ ရိုက္ကြင္းေပၚမွာပဲ ေတြ့ဆံုျပီး ဖူးစာဆံုခဲ့ၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ပိုင္ျဖိဳးသုနဲ့ ဏၾကီးတို့က ျပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၉) ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္းမွာ လက္ထပ္ခဲ့ၾကျပီး အခုဆိုရင္ အိမ္ေထာင္သက္ (၂) နွစ္နီးပါးရိွခဲ့ျပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပိုင္ျဖိဳးသုနဲ့ ဏၾကီးတို့ကေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ့တစ္ေယာက္ အသက္ (၈) နွစ္ေက်ာ္ကြာတာမို့ ဒါရိုက္တာဏၾကီးကေတာ့ သူ့ရဲ့ ဇနီးအေပၚ ကေလးေလးတစ္ေယာက္လို ခ်စ္ရွာသူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကေန့မွာေတာ့ ပိုင္ျဖိဳးသုက ခ်စ္ဇနီးကို ကေလးေလးတစ္ေယာက္လိုပဲ ျမင္ခ်င္တဲ့ ဒါရိုက္တာဏၾကီးအေၾကာင္းကို အခုလိုပဲ ေျပာျပလာပါတယ္။ “ဦးေရခဲေရ…ရွင္လည္းေမ့ေနမွာစိုးလို႔….ေ ဒၚသုအသက္(၁၆)ႏွစ္မဟုတ္ေတာ့ဘူးေနာ္…. ဘယ့္ႏွယ့္ ဂ်င္းေဘာင္းဘီအရွည္ကို blouseအက်ႌ‌ေလးနဲ႔တြဲဝတ္မိပါတယ္ လူႀကီးလိုမဝတ္နဲ႔ မလိုက္ဘူး…တဲ့ 🥺 အဲ့ေတာ့ကြၽန္မက ပါးေရေတြတြန႔္တဲ့အထိ T shirtနဲ႔ေဘာင္းဘီတိုေလးနဲ႔ေနရမွာလား 😏 နဂိုကတည္းရွင့္မိန္းမကလူမေလးေခြးမခန႔္ပါဆိုမွ…တကယ္ပဲ… 😤” ဆိုျပီး ဒါရိုက္တာဏၾ႕ီးအေၾကာင္း ေျပာျပလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါရိုက္တာဏၾကီးကေတာ့ ရင္ေသြးေလးကို ပိုင္ဆိုင္ခ်င္ေနျပီျဖစ္ေပမယ့္ ပိုင္ျဖိဳးသုကေတာ့ အနုပညာအလုပ္ေတြ လုပ္ေနရတာမို့ ခ်စ္ဇနီးကိုပဲ ကေလးတစ္ေယာက္လို ခ်စ္ရွာေနရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ၾကီးလည္း ခင္ပြန္းဆီမွာ ယုယုယယအခ်စ္ခံရလြန္းတဲ့ ပိုင္ျဖိဳးသုကို အားက်ေနမယ္ ထင္ပါတယ္ေနာ္။ ဖတ္ရႈေပးတဲ့ Cele Connections ပရိသတ္ႀကီးအားလုံးလည္း သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။
သားသမီးရတနာမရှိသေးချိန်မှာ ချစ်ဇနီးကိုပဲ ကလေးလေးလိုမြင်ပြီးချစ်ရှာတဲ့ ဒါရိုက်တာဏကြီးအကြောင်းပြောပြလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
ဒါရိုက်တာ ဏကြီးနဲ့ သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဖြိုးသုတို့ကတော့ အနုပညာရှင်တွေပီပီ ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာပဲ တွေ့ဆုံပြီး ဖူးစာဆုံခဲ့ကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်ဖြိုးသုနဲ့ ဏကြီးတို့က ပြီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၉) ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာ လက်ထပ်ခဲ့ကြပြီး အခုဆိုရင် အိမ်ထောင်သက် (၂) နှစ်နီးပါးရှိခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်ဖြိုးသုနဲ့ ဏကြီးတို့ကတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အသက် (၈) နှစ်ကျော်ကွာတာမို့ ဒါရိုက်တာဏကြီးကတော့ သူ့ရဲ့ ဇနီးအပေါ် ကလေးလေးတစ်ယောက်လို ချစ်ရှာသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာတော့ ပိုင်ဖြိုးသုက ချစ်ဇနီးကို ကလေးလေးတစ်ယောက်လိုပဲ မြင်ချင်တဲ့ ဒါရိုက်တာဏကြီးအကြောင်းကို အခုလိုပဲ ပြောပြလာပါတယ်။ “ဦးရေခဲရေ…ရှင်လည်းမေ့နေမှာစိုးလို့….ေ ဒါ်သုအသက်(၁၆)နှစ်မဟုတ်တော့ဘူးနော်…. ဘယ့်နှယ့် ဂျင်းဘောင်းဘီအရှည်ကို blouseအင်္ကျီ‌လေးနဲ့တွဲဝတ်မိပါတယ် လူကြီးလိုမဝတ်နဲ့ မလိုက်ဘူး…တဲ့ 🥺 အဲ့တော့ကျွန်မက ပါးရေတွေတွန့်တဲ့အထိ T shirtနဲ့ဘောင်းဘီတိုလေးနဲ့နေရမှာလား 😏 နဂိုကတည်းရှင့်မိန်းမကလူမလေးခွေးမခန့်ပါဆိုမှ…တကယ်ပဲ… 😤” ဆိုပြီး ဒါရိုက်တာဏြ့ီးအကြောင်း ပြောပြလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါရိုက်တာဏကြီးကတော့ ရင်သွေးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ချင်နေပြီဖြစ်ပေမယ့် ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်နေရတာမို့ ချစ်ဇနီးကိုပဲ ကလေးတစ်ယောက်လို ချစ်ရှာနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ခင်ပွန်းဆီမှာ ယုယုယယအချစ်ခံရလွန်းတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုကို အားကျနေမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။